जुलाई मा Hokkaido मौसम! तापमान, वर्षा र लुगाहरू - Best of Japan
इरोडोरी क्षेत्र, टोमिटा फार्म, फुरानो, जापान। यो होक्काइडो = शटरस्टकमा प्रसिद्ध र सुन्दर फूल क्षेत्र हो
जापानमा जुलाई! ग्रीष्मकाल बयाना मा सुरु हुन्छ! तातोबाट सावधान! >
यस पृष्ठमा, म जुलाईमा होक्काइडोको मौसमको बारेमा छलफल गर्नेछु। जुलाई अवलोकन गर्नका लागि उत्तम मौसम हो। हरेक जुलाईमा जापान र विदेशबाट धेरै पर्यटक होक्काइडो आउँछन्। होक्काइडोमा, यो दुर्लभ हुन्छ कि यो टोकियो वा ओसाका जत्तिकै तातो हुनेछ। बिहान र साँझको तापक्रम ड्रपले राहत दिनेछ, त्यसैले तपाईं वास्तवमै आरामदायी यात्राको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
तल जुलाईमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्।
जुलाई र होक्काइडो बारे प्रश्न र उत्तर
जुलाई मा होक्काइडो मा मौसम (अवलोकन)
जुलाईको सुरूमा होक्काइडो मौसम
Hukkaido जुलाई को बीचमा मौसम
जुलाईको अन्तमा होक्काइडो मौसम
के होक्काइडोमा जुलाईमा हिउँ पर्दछ?
जुलाईमा होक्काइडोमा कुनै हिउँ छैन।
के जुलाईहरु मा होक्काइडोमा फूलहरू फुलिरहेका छन्?
ल्याभेन्डर जुलाई मा होक्काइडो मा आफ्नो चरम पुगेको छ। विशेष गरी जुलाई को बीच देखि फूल क्षेत्रहरु सुन्दर छन्।
जुलाईमा होक्काइडो कत्तिको चिसो छ?
होक्काइडो जुलाई मा एक गर्मी पर्यटन मौसम हुनेछ। यो चिसो छैन, तर यो बिहान र साँझ चिसो छ।
जुलाईमा होक्काइडोमा हामीले कस्तो खालका लुगाहरू लगाउनु पर्छ?
ग्रीष्मकालीन लुगा जुलाईमा ठीक हुनेछ। जे होस्, यो बिहान र साँझ होक्काइडोमा चिसो छ, त्यसैले कृपया ज्याकेट वा कार्डिगन ल्याउनुहोस्। जापानमा ग्रीष्म clothesतुका लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
यदि तपाईं हिउँ हिउँदको दृश्यको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ भने जनवरी र फेब्रुअरी उत्तम महिनाहरू हुन्। यदि तपाईं सुन्दर फूलहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने म जुलाई र अगस्त सिफारिश गर्दछु।
जुलाईमा होक्काइडो (सप्पोरो) मा तापमान परिवर्तन
ग्राफ: जुलाईमा होक्काइडो (सप्पोरो) मा तापमान परिवर्तन
तपाईंले माथिको ग्राफबाट देख्न सक्नुहुन्छ, होक्काइडोमा पनि, दिनको अधिकतम तापमान जुलाईमा २ degrees डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी छ।
होक्काइडोमा पनि, जुलाई दिनको समयको तापक्रम हरेक वर्ष २ over डिग्रीभन्दा बढीमा जान्छ। जुलाईको अन्तमा, अधिकतम तापक्रम कडा सूर्यको प्रकाशको साथ degrees० डिग्रीसम्म पुग्नेछ।
यस कारणले गर्दा, पहिलो पटक होक्काइडो जाने पर्यटकहरूले अक्सर होक्काइडो अप्रत्याशित रूपमा तातो भएको महसुस गर्छन्।
यद्यपि होक्काइडोमा अधिकतम तापक्रम विरलै 35 XNUMX डिग्री भन्दा बढी हुन्छ र आर्द्रता कम छ।
उदाहरण को लागी, टोकियो र क्योटोमा यस समयमा धेरै मानिसहरु असहज महसुस गर्छन् किनकि दैनिक तापक्रम प्राय: degrees ex डिग्री भन्दा बढी आर्द्रताको साथ बढ्छ।
अर्को तर्फ, होक्काइडोमा, सूर्य कडा छ तर यो आर्द्र छैन। यसले यहाँ तपाईंको समय खर्च गर्न निकै सजिलो बनाउँदछ। मलाई लाग्छ कि यो बिहान र रात हो कि होक्काइडोमा गर्मीको चिसो महसुस हुन्छ। होक्काइडोमा, बिहान र साँझको तापक्रम वर्षभरि कम हुन्छ। बिहान र साँझ प्राय: जुलाई मा पनि १ degrees डिग्री भन्दा कम हुन्छ। छोटो बाहिरी शर्ट लगाउँदा यो धेरै चिसो महसुस हुन्छ।
यदि तपाईं जुलाईमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, म बिहान हिंड्ने सल्लाह दिन्छु। तपाईं एक धेरै स्फूर्तिदायक वातावरणको आनन्द लिन सक्षम हुन सक्नुहुन्छ।
जापानको धेरै क्षेत्रहरु हरेक साल जुलाई को मध्य सम्म एक वर्षा experienceतु अनुभव गर्नेछन्। यद्यपि होक्काइडोमा खास वर्षाको मौसम छैन। यस अद्भुत समयमा, म तपाईंलाई चाहिएको जस्तो होक्काइडोको आनन्द लिन चाहन्छु।
तल, म जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीले घोषणा गरेको मौसम डाटा प्रदान गर्नेछु।
होक्काइडोमा मौसम डेटा (जुलाईको सुरूमा)
साप्पोरो २.23.7..15.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.24.6..XNUMX मिमी (-)
ओटारु २.22.4..15.2 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.24.5..XNUMX मिमी (-)
Asahikawa २.24.9..14.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.24.0..XNUMX मिमी (-)
Biei २.24.3..12.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.27.3..XNUMX मिमी (-)
फुरानो २.24.9..14.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.33.2..XNUMX मिमी (-)
Wakkanai २.18.7..13.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.21.2..XNUMX मिमी (-)
अबाशिरी २.19.5..12.4 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.21.1..XNUMX मिमी (-)
उटोरो २.20.1..11.4 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.23.1..XNUMX मिमी (-)
नेमुरो २.16.6..10.2 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.35.5..XNUMX मिमी (-)
Kushiro २.17.1..11.3 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.40.3..XNUMX मिमी (-)
ओबिहिरो २.22.2..12.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.31.5..XNUMX मिमी (-)
Hakodate २.22.0..15.0 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.42.6..XNUMX मिमी (-)
जुलाई:: होक्काइडो, जापानमा ग्रीष्म theतुमा फूलको खेतमा जाने दम्पतीको दृश्य = जापान = शटरस्टक
जुलाईको सुरूमा, टोकियो र ओसाका अझै पनि वर्षा inतुमा छन्। यसको विपरित, होक्काइडोका धेरै क्षेत्रमा अपेक्षाकृत थोरै वर्षा भएको छ। तपाईं आरामदायी यात्राको मजा लिनुहुनेछ।
यो अझै बिहान र बेलुका चिसो छ, त्यसैले लामो बाहुला लुगा ल्याउनुहोस्।
जुलाईको सुरूमा, सप्पोरोमा सूर्योदय समय करिब 4:०० हुन्छ। सप्पोरोमा सूर्यास्त समय करिब १ 01: १। हो।
पूर्वी होक्काइडोमा अवस्थित नेमुरोमा सूर्योदय 3::43 तिर छ। सूर्यास्त समय करीव १ :19: १। हो।
कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोमा सूर्योदय र सूर्यास्त टोकियो र ओसाका भन्दा धेरै छिटो छ।
होक्काइडोमा मौसम डाटा (जुलाईको मध्य)
साप्पोरो २.24.5..17.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.24.6..XNUMX मिमी (-)
ओटारु २.23.2..16.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.27.7..XNUMX मिमी (-)
Asahikawa २.25.3..15.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.39.5..XNUMX मिमी (-)
Biei २.24.6..14.0 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.33.6..XNUMX मिमी (-)
फुरानो २.25.1..15.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.34.2..XNUMX मिमी (-)
Wakkanai २.19.5..14.3 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.25.8..XNUMX मिमी (-)
अबाशिरी २.20.1..13.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.35.5..XNUMX मिमी (-)
उटोरो २.20.6..12.9 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.40.4..XNUMX मिमी (-)
नेमुरो २.17.2..11.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.49.9..XNUMX मिमी (-)
Kushiro २.18.6..12.7 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.54.2..XNUMX मिमी (-)
ओबिहिरो २.23.1..14.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.45.4..XNUMX मिमी (-)
Hakodate २.23.1..16.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.45.3..XNUMX मिमी (-)
जुलाई १ 14 २०१:: आकान नेशनल पार्क, होक्काइडो, जापान = शटरस्टकमा अकान हट स्प्रि।
जुलाईको मध्यमा, होक्काइडोमा पनि त्यहाँ केही क्षेत्रहरू छन् जुन अधिकतम तापक्रम degrees० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुन्छ। जे होस्, यो सहज छ किनकि आर्द्रता टोकियो र ओसाका भन्दा कम छ।
जसरी बिहान र साँझ चिसो छ, लामो बाहिरी लुगा अझै पनी आवश्यक छ।
जुलाईको मध्यमा सप्पोरोमा सूर्योदय समय करिब 4:०08 हुन्छ। सूर्यास्त समय १ 18::56 को बारेमा छ।
पूर्वी होक्काइडोको नेमुरोमा, सूर्योदय समय करीव 3:50० हो। सूर्यास्त समय १:18::56 छ।
होक्काइडोमा मौसम डाटा (जुलाईको अन्तमा)
साप्पोरो २.26.3..18.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.25.4..XNUMX मिमी (-)
ओटारु २.25.3..18.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.27.0..XNUMX मिमी (-)
Asahikawa २.26.9..17.3 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.45.2..XNUMX मिमी (-)
Biei २.26.4..15.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.42.3..XNUMX मिमी (-)
फुरानो २.27.1..16.9 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.32.6..XNUMX मिमी (-)
Wakkanai २.20.8..16.0 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.43.6..XNUMX मिमी (-)
अबाशिरी २.22.7..15.7 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.30.8..XNUMX मिमी (-)
उटोरो २.23.0..14.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.37.1..XNUMX मिमी (-)
नेमुरो २.19.6..13.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.36.3..XNUMX मिमी (-)
Kushiro २.20.1..14.2 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.33.3..XNUMX मिमी (-)
ओबिहिरो २.25.0..16.0 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.29.6..XNUMX मिमी (-)
Hakodate २.25.0..18.2 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.42.4..XNUMX मिमी (-)
जुलाई :०: जंगलमा बच्चाहरूको खेल मैदान, फुरानो, होक्काइडो = शटरस्टक
यो जुलाईको पछि देखि अगस्टको शुरुमा वर्षको तातो समय हो। Hokkaido पनि दिनको समयमा धेरै कडा धूप छ।
तर अझै पनि आर्द्रता अपेक्षाकृत कम छ। तपाईं छायामा हुनुहुन्थ्यो भने यो तुलनात्मक रूपमा सहज हुनेछ।
यद्यपि यो मिडसमर हो, कृपया सावधान हुनुहोस् कि यदि तपाई पहाडमा जानुहुन्छ भने, यो राम्रो छ।
जुलाईको अन्तमा, सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव :4:१:17 छ। सूर्यास्त समय लगभग १ :19: ०:04 हो।
नेमुरोमा सूर्योदय समय करीव :3::59। हो। सूर्यास्त १ 18::48 को बारेमा छ।
※ सूर्योदय र सूर्यास्त समयहरू जापानको नेशनल एस्ट्रोनोमिकल वेधशाला द्वारा जारी गरिएको २०१ data डाटामा आधारित छन्। मैले जुलाईको शुरुमा 2019th मा समय र जुलाई जुलाईको लागि १th औँमा र जुलाई २ late को लागि जुलाई पोस्ट गरें।
"जुलाई" मा फिर्ता